Jiro LED LED | China LED jiro mpanamboatra, mpamatsy
Ny hazavana mamirapiratra dia mivoaka tanteraka, miaraka amin'ny zoro luminance midadasika kokoa. Ny famolavolana faritra manokana, hisorohana jiro ratsy tokana dia misy akony amin'ny vokany amin'ny ankapobeny, tsy misy fanelingelenana amin'ny radio, tsy handoto ny tontolo iainana. Mitsitsy angovo, hamirapiratra avo, tsy misy merkiora, tsy misy infrared, tsy misy ULTRAVIOLET, tsy misy fitsabatsabahana elektromagnetika, tsy misy effets thermal, tsy misy taratra, tsy misy tranga stroboscopic. Mavesatra maivana ary mora hapetraka. Mety ho an'ny trano fandraisam-bahiny, efitrano fivoriana, ozinina na birao, USES ara-barotra, toeram-ponenana na toeram-bahoaka, sekoly sy hopitaly izay mitaky angovo sy jiro fanondroana miloko maivana.
18W 40W 80W nitentina jiro LED SMD madio ho an'ny efitrano madio
Ny volavolan-jiro fanaovan-jiro mirehitra madio dia matevina ary manakaiky ny valindrihana. Ny vatan'ny jiro sy ny fonony aoriana dia feno tombo-kase avo lenta. Tsy misy vovoka, mora diovina, tsy misy taratra. Ny teknolojia fanaovan-jiro semiconductor farany namboarina dia manatsara be indrindra ny ain'ny loharano maivana ary tsy misy ny rakotra fanazavana amin'ny jiro fluorescent nentim-paharazana izay tena sariaka amin'ny tontolo iainana. Hopitaly, fivarotam-panafody, fanodinana sakafo, fitahirizana ary jiro safidy jiro madio tsara. Ny haben'ny haben'ny vatana maivana sy ny loharano maivana dia tsy voatery. Nampiasaina tamin'ny haavo 100-10000 haavo amin'ny fahadiovana.
Water-proof 9W 18W 25W LED chip karazana tri-proof jiro
Mihaona amin'ny laharana IP65 ny fahazavana. Waterproof, hamandoana-porofo, vovoka famehezana vovoka, firafitra mirindra, tsara tarehy sy malala-tanana, famolavolana hidin-trano mora kokoa amin'ny mpampiasa, mora apetraka sy tazomina. Tompon-jiro lohan'olon-tokana, plastika injeniera miambina avo lenta 250V avo lenta, tanjaka mekanika avo, savaivony ary haavony mampiakatra karazana rotary, fampisehoana fifandraisana tsara. Volavola novina, firafitra matevina, fisehoana tsara tarehy, mora apetraka sy tazomina, fanombohana haingana. Izy io dia mety amin'ny toerana anatiny sy ivelany miaraka amin'ny fepetra takian'ny rano, porofo vovoka ary hamandoana.
70W 100W 150W voltaka lehibe LED jiro tetikasa-jiro
Ny aloky ny hazavana dia vita amin'ny alim-bary maty avo lenta, loharanom-pahazavana manaparitaka hafanana tena tsara dia vita amin'ny vakana jiro avo indrindra, famirapiratana avo ary fampiasana azo antoka kokoa; Ny famatsian-jiro tsy tapaka ankehitriny dia natsangana mba hiantohana ny fahombiazan'ny jiro. Mety amin'ny jiro avo lenta ao an-trano, toy ny atrikasa, toerana ho an'ny daholobe ary jiro habakabaka hafa.
180V ~ 220VAC firaka vita amin'ny alimina mangatsiaka mihodina LED hazavana
Ny vatana maivana dia vita amin'ny alim-bolan'ny alimina matevina, rafitra somary manify, maivana emitting mode, vovoka ambony fitsaboana hafanana avo lenta, fanoherana ny harafesina. Ny rafitra fampiasana jiro dia manome LEDSMB2835 mifanaraka amin'ny fenitry ny American Energy Star, miaraka amin'ny fahalovana kely sy fahazavana avo lenta. Mitsubishi takelaka fanaparitahana optique, hazavana malefaka kokoa, fahombiazan'ny hazavana avo lenta. Manohana ny herin'ny herinaratra mitoka-monina tsy tapaka, famatsiana herinaratra avo lenta, fisafidianana fitaovana henjana, fitsapana mafy, hahazoana antoka fa hiasa maharitra sy maharitra ny jiro. Toerana azo ampiharina: Ivon-kanton'ny tranom-bakoka, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny avo lenta, toeram-pivarotana lehibe ary jiro fanalahidy anaty hafa.
takelaka gusset aluminium mihantona valin-drihana LED hazavana tontonana madio
Ny hazavana mamirapiratra dia mivoaka tanteraka, miaraka amin'ny zoro luminance midadasika kokoa. Ny famolavolana faritra manokana, hisorohana jiro ratsy tokana dia misy akony amin'ny vokany amin'ny ankapobeny, tsy misy fanelingelenana amin'ny radio, tsy handoto ny tontolo iainana. Mitsitsy angovo, hamirapiratra avo, tsy misy merkiora, tsy misy infrared, tsy misy ULTRAVIOLET, tsy misy fitsabatsabahana elektromagnetika, tsy misy effets thermal, tsy misy taratra, tsy misy tranga stroboscopic. Mavesatra maivana ary mora hapetraka. Mety amin'ny trano fandraisam-bahiny, efitrano fivoriana, ozinina na birao, fampiasana ara-barotra, toeram-ponenana na toeram-bahoaka, sekoly sy hopitaly izay ilana fitehirizana angovo sy jiro fanondroana miloko maivana.
Class 1 manavotra angovo bevel sisiny jiro madio tontonana
Ny hazavana mamirapiratra dia mivoaka tanteraka, miaraka amin'ny zoro luminance midadasika kokoa. Ny famolavolana faritra manokana, hisorohana jiro ratsy tokana dia misy akony amin'ny vokany amin'ny ankapobeny, tsy misy fanelingelenana amin'ny radio, tsy handoto ny tontolo iainana. Mitsitsy angovo, mamirapiratra avo, tsy misy mercury, tsy misy infrared, tsy misy ultraviolet, tsy misy interferensi elektromagnetika, tsy misy effets thermal, tsy misy taratra, tsy misy stroboscopic tranga. Mavesatra maivana ary mora hapetraka. Mety amin'ny trano fandraisam-bahiny, efitrano fivoriana, ozinina na birao, fampiasana ara-barotra, toeram-ponenana na toeram-bahoaka, sekoly sy hopitaly izay ilana fitehirizana angovo sy jiro fanondroana miloko maivana.
Kilasy 1 mitsitsy angovo vy tsy misy jiro LED jiro madio
Ny hazavana mamirapiratra dia mivoaka tanteraka, miaraka amin'ny zoro luminance midadasika kokoa. Ny famolavolana faritra manokana, hisorohana jiro ratsy tokana dia misy akony amin'ny vokany amin'ny ankapobeny, tsy misy fanelingelenana amin'ny radio, tsy handoto ny tontolo iainana. Mitsitsy angovo, mamirapiratra avo, tsy misy mercury, tsy misy infrared, tsy misy ultraviolet, tsy misy interferensi elektromagnetika, tsy misy effets thermal, tsy misy taratra, tsy misy stroboscopic tranga. Mavesatra maivana ary mora hapetraka. Mety ho an'ny trano fandraisam-bahiny, efitrano fivoriana, ozinina na birao, USES ara-barotra, toeram-ponenana na toeram-bahoaka, sekoly sy hopitaly izay mitaky angovo sy jiro fanondroana miloko maivana.
Kilasy 1 mitsitsy angovo mahitsy karazana LED hazavana tontonana madio
Ny hazavana mamirapiratra dia mivoaka tanteraka, miaraka amin'ny zoro luminance midadasika kokoa. Ny famolavolana faritra manokana, hisorohana jiro ratsy tokana dia misy akony amin'ny vokany amin'ny ankapobeny, tsy misy fanelingelenana amin'ny radio, tsy handoto ny tontolo iainana. Mitsitsy angovo, hamirapiratra avo, tsy misy merkiora, tsy misy infrared, tsy misy ULTRAVIOLET, tsy misy fitsabatsabahana elektromagnetika, tsy misy effets thermal, tsy misy taratra, tsy misy tranga stroboscopic. Maivana, mora apetraka, mety amin'ny trano fandraisam-bahiny, efitrano fihaonambe, ozinina na birao, fampiasana ara-barotra, toeram-ponenana na toeram-bahoaka, sekoly, hopitaly mila fitsitsiana angovo sy jiro miloko maivana.
Kilasy fahazavana grille LED tsy voarohirohy kilasy 1
Izy io dia mampiditra fizarana hazavana tena tsara, fatiantoka angovo ambany ary fifehezana hazavana ho lasa jiro iray mba hahatratrarana takiana hazavana amin'ny birao avo lenta. Azo ampifandraisina amin'ny safidy roa, telo, efatra fantsona, mety amin'ny filàna samihafa amin'ny fizarana fahazavana milamina, ny tahan'ny famoahana hazavana mihoatra ny 70% boky kely, mahasoa amin'ny fitaterana, fitahirizana, fametrahana. Ny litera "V" dia miorina amin'ny fametrahana, ary ny litera "X" kosa miorina amin'ny tafo. Mety amin'ny tranon'ny birao, birao, toeram-pivarotana lehibe, efitrano fiandrasana, ozinina, sekoly, hopitaly sy toerana hafa ho an'ny besinimaro.
Mitsitsy angovo 150W 250W 400W hazavana fitrandrahana LED
Mety amin'ny zavamaniry indostrialy, magazay fivarotana, fivarotana lehibe, efitrano fiandrasana, efitrano fiandrasana, ivon-fampirantiana, gymnasium ary jiro hafa.
Fahazavana LED braket fampidirana ho an'ny birao, toeram-ponenana, fampiasana komisiona
Volavola noforonina, bika tsara tarehy, volavola kely. Mety amin'ny birao, trano, jiro ara-barotra sns.